Kanadà dia tsy maintsy ataon'ny vaksiny ho an'ny sehatry ny fitaterana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Kanadà dia tsy maintsy ataon'ny vaksiny ho an'ny sehatry ny fitaterana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Manomboka amin'ny 30 Oktobra 2021, ireo mpandeha miainga avy amin'ny seranam-piaramanidina Kanadiana, sy ireo mpandeha amin'ny fiaran-dalamby VIA Rail sy Rocky Mountaineer, dia takiana amin'ny fanaovana vaksiny feno, miaraka amin'ireo fanilikilihana voafetra tokoa.
Kanada dia mitaky vaksiny COVID-19 manerana ny serivisy ho an'ny daholobe federaly sy ny sehatry ny fitaterana federaly.
Ny praiminisitra Justin Trudeau, ary ny praiminisitra lefitra, Chrystia Freeland, dia nanambara ny antsipirian'ny drafitry ny governemanta mitaky vaksiny COVID-19.
Ny mpampiasa amin'ny sehatry ny fitaterana an'habakabaka sy lalamby ary fitaterana an-dranomasina dia voafaritra hatramin'ny 30 Oktobra 2021 hanaraka izany.
Hatramin'ny niandohan'ny areti-mifindra COVID-19 dia nanao fanoloran-tena izahay hiaro ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Kanadiana rehetra. Izany no antony niasantsika mafy tamin'ny fitondrana vaksiny azo antoka sy mahomby ary nametraka ny dingana ho amin'ny fanarenana izay mahasoa ny rehetra. Misaotra ireo Kanadiana an-tapitrisany izay nanakodia ny tanany hanaovana vaksiny, ary ankehitriny manana 82 isan-jaton'ny Kanadiana afaka vaksiny feno, i Canada dia mpitarika manerantany amin'ny vaksinin'ny COVID-19. Amin'ny maha-mpampiasa lehibe indrindra ao amin'ny firenena azy, ny Governemanta Canada dia hanohy handray andraikitra amin'ny fiarovana ny fiarovana ny toeram-piasantsika, ny vondrom-piarahamonintsika ary ny Kanadiana rehetra amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny ankamaroan'izy ireo araka izay azo atao dia vita vaksiny tanteraka.
The Ny praiminisitra Justin Trudeau, sy ny praiminisitra lefitra, Chrystia Freeland, dia nanambara ny antsipirian'ny drafitra takian'ny governemanta Vaksiny COVID-19 manerana ny sampandraharaham-panjakana federaly sy ny sehatry ny fitaterana federaly mifehy.
Araka ny politika vaovao, ny mpiasam-panjakana federaly ao amin'ny Core Public Administration, ao anatin'izany ny mpikambana ao amin'ny Royal Canadian Mounted Police, dia takiana hanamafisana ny satan'ny vaksiny hatramin'ny 29 Oktobra 2021. Ireo izay tsy te-hampahafantatra ny maha vaksiny azy ireo na ho feno Ny vaksininy dia apetraka amin'ny fialan-tsasatra ara-pitantanana tsy misy karama hatramin'ny 15 Novambra 2021.
Ireo mpampiasa ao amin'ny rivotra fehezina federaly, sehatry ny fitaterana an-dranomasina, ary fitaterana an-dranomasina dia hanana hatramin'ny 30 Oktobra 2021, hametrahana politika fanaovana vaksiny hiantohana ny fanaovana vaksiny ny mpiasa. Manomboka amin'ny 30 Oktobra 2021, ireo mpandeha miainga avy amin'ny seranam-piaramanidina Kanadiana, sy ireo mpandeha amin'ny fiaran-dalamby VIA Rail sy Rocky Mountaineer, dia takiana amin'ny fanaovana vaksiny feno, miaraka amin'ireo fanilikilihana voafetra tokoa. Ny governemanta dia miara-miasa amin'ny indostria sy ireo mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny fametrahana fepetra takiana amin'ny vaksiny henjana amin'ny sambo fitsangantsanganana alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoana fitsangantsanganana 2022.
Ny orinasam-panjakana sy ny masoivoho misaraka dia angatahina mba hampihatra ny politikan'ny vaksininy izay manome taratra ireo fepetra takiana nambara androany ho an'ny sisa amin'ny asam-panjakana. Ny Lehiben'ny andraikitra mpiasan'ny fiarovana dia hamoaka toromarika mitaky vaksiny ho an'ny tafika kanadiana. Ny governemanta dia hiara-hiasa amin'ireo mpampiasa any amin'ny toeram-piasana hafa voafetran'ny federaly mba hahazoana antoka fa hatao laharam-pahamehana ho an'ny mpiasa ireo sehatra ireo.
Amin'ny alàlan'ny fitakiana vaksiny avy amin'ny mpiasam-panjakana federaly, mpandeha ary mpiasa amin'ny sehatry ny fitaterana federaly, ny governemanta Canada dia hampihena ny risika COVID-19, hisorohana ny valan'aretina amin'ny ho avy ary hiaro ny fahasalaman'ny kanadiana. Ny vaksiny dia mbola laharam-pahamehana ho an'ny governemanta satria miasa izahay hiantohana ny famerenana amin'ny laoniny ara-toekarena matanjaka ary hanangana Kanada azo antoka sy salama kokoa ho an'ny rehetra.